Cabdikaafi iyo Nabadoon Yaasiin Cabdisamad oo xabsiga laga sii daayey • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Cabdikaafi iyo Nabadoon Yaasiin Cabdisamad oo xabsiga laga sii daayey
Cabdikaafi iyo Nabadoon Yaasiin Cabdisamad oo xabsiga laga sii daayey
Waxaa maanta (Sabti) Xabsiga weyn ee magaalada Garowe laga sii daayey Cabdikaafi Xassan Maxamed iyo Nabadoon Yaasiin Cabdisamad, oo muddo 7 maalmood ah xabsiga Garowe ku jirey iyaga oo aan maxkmad la horgeyn. Cabdikaafi iyo Yaasiin C abdisamad ayaa la xirey 22/12/2012, xabsigooda ayaa ah mid siyaasadeed waxaana maamulku u xirey in shir ay doonayeen in lagu qabto magaalada Garowe kaas oo looga hadlaayo sidii xal looga gaari lahaa ismaan-dhafka siyaasadeed ee ka aloosan Puntland.
Sida HORSEED ogaatey in odoyaal ay maanta (Sabti) xabsiga tageen isla markaana u sheegeen in ay xabsiga isaga soo baxaan, Mid kamid ah raga xirnaa ayaa HORSEED u sheegay in aysan garanayn waxa lagu xirey iyo qaabka loo sii daayey midna maadaama wax maxkmad ah la horgeyn .
Nabadoon Yaasiin Cabdisamad ayaa ka mid ahaa ergadii ka timid gobolka Mudug, ma jirin wax gaar-ka ah ergada oo uu la yimid, taas oo Nabadoonada beesha Yaasiin baaq ka soo saareen kadib markii Guddoomiyaha Gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Qarjab sheegay in uu ula dhaqmayo raga isagaka kala yimid Gobolada Puntland ee ergooyinka isku sheegay sida Jirrida Isbaarada dhigta oo kale, waxaana ay ku baaqeen odoyaashu in deg-deg la sii daayo garawshiyina laga bixiyo.
Cabdikaafi Xassan Maxamed ayaa ka duwan, waxa uu ahaa masuul ka tirsan Hay’adda Daryeelka Bulshada ee Puntland, ma jirin qoraalo uu soo saarey ama idaacado uu ka hadley, Agaasimha Hay’adda Daryeelka Bulshada ee Puntland Ismaaciil Adam Diiriye ayaa sheegay waxa loo xirey Cabdikaafi in ay tahay aragtidiisa siyaasadeed oo keliya taas oo ah in maamulkaan xiligiisu ahaa 4 sano oo keliya, taas oo ku eg 08 Jan 2013.
Cabdikaafi waxaa la xirey laba jeer marka hore waxay ahayd 16/12/2012, ma jirin waaran maxkmadeed ama dacwad lagu soo oogey waxaana la soo daayey 48saac kadib, muddadii u xabsiga ku jirey waxaa laga dabageeyey wareegto uu soo saarey madaxweyne ku-xigeenka Puntland taas oo xilka looga qaadey laguna eedeeyey lunsasho hanti Qaran, ma jirin denbi iyo dacwad lagu soo oogey, waxaa dib loo qabtey mar labaad 22/12/2012 si la mid ah markii hore iyada oo aan la marin qaabka uu dhigato xeerka eedaysanaha.
Gabadh la dhalatey Cabdikaafi oo la yiraahdo Safiya Xassan ayaa warbaahinta VOA u sheegtey in walaalkeed qabo cudurka Sonkorta iyo Dhiig karka, isla markaana uu yahay qof gacan u baahan oo Indhoole ah, waxay shegtey in uu ka soomey cunadii iyo daawooyinkii joogtada ahaa ee uu qaadanayey, waxaana Safiya wel-wel ka muujisey xaaladiisa.
Waxaa jirey laba nin oo kale oo la xirnaa Nabadoon Yaasiin Cabdisamad iyo Cabdikaafi Xassan Maxamed kuwaas oo la kala yiraahdo Maxamed Xasan Nuur iyi Axmed Faarax Maxamed (Shiino), labadan nin oo isku qaddiyad ay u xirnaayeen raga kale ayaa iyagana xabsiga laga sii daayey.
Dastuurka Puntland ee maamulka hadda talada hayaa sheego in waxyaabihii u weynaa e ay dalka u qabteen ay ka mid tahay in ay sameeyeen dastuur rasmi ah ayaa la isweydiinayaa xurmada iyo kudhaqanka loo hayo dastuurkaas dhigaya: Qodobka 26aad Eedeysane kasta waa in 48 saacadood gudahood xariggiisa maxkamadi ku xalaaleyso, taas oo macnaheedu yahay waa in la sii daayaa intaas ka badan Maxkmad la’aan lama hayn karo qof, waxaase la isweydiinayaa inta qof ee arrimaha caynkan oo kale ah dhibane u ah. Hay’adda Isku xirka Nabadda iyo Xuquuqda Aadanaha ee INXA ayaa baaq ka sdoo saartey arrintan iyada uu cuskanaysa qodobo ka mid ah dasuurka la dhigtey ee loogu talo galay in lagu kala baxo.